०७७ कार्तिक २१ गते, इ.स. २०२० नोभेम्बर ०६ तारिख शुक्रबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य! – PathivaraOnline
Home > राशिफल > ०७७ कार्तिक २१ गते, इ.स. २०२० नोभेम्बर ०६ तारिख शुक्रबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य!
admin November 5, 2020 राशिफल	0
मिति २०७७ कार्तिक २१ गते, इ.स. २०२० नोभेम्बर ०६ तारिख शुक्रबार, हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य! यस प्रकार रहेको छ। तपाईहरूको दिन शुभ रहोस्।
शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुटे पनि सानो कमजोरीले विवाद हुनेछ। परिबन्धले समस्या निम्त्याउने हुँदा योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। मौका पर्खंदा स्थितिमा सुधार आउनेछ। मिहिनेतले आँटेको काम बन्नेछ। समाजमा आफ्नो प्रभाव बढ्न सक्छ।
अध्ययनसम्बन्धी कार्यमा प्रगति हुने देखिएको छ। व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। घरजग्गा खरीद तथा जग्गासम्बन्धी कारोबार हुने छ। यात्रा सफल हुने छ। श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ। पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ। मनोरञ्जनमा सहभागी भइएला।
मानसिक चिन्ता बढ्नेछ। मिष्ठान्न भोजन प्राप्ति हुनेछ। कार्य्सिद्धि हुने अवसर मिल्नेछ। अतिथिको सेवा गर्नुपर्ने छ।मुद्दा मामिलामा विजयी पाप्त हुनेछ।धर्म, कर्म तथा समाज सेवामा मन लाग्ने छ। रोकिएको धन हात पर्ला।
आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ। शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ। पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। कला क्षेत्रमा काम गर्नेलाई धेरै राम्रो दिन छ।
यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ। घरायसी झमेलामा परिएला।बाटो काट्दा वा यात्रा गर्दा सचेत हुनुपर्छ। आफूलाई कमजोर भएको अनुभू तिहुनेछ। अनावश्यक धन खर्च होला।वित्तीय क्षेत्रको काममा फाइदा मिल्ने छ। नयाँ काम वा रोजगार पाइने छ।
दिन रमाइलोसँग बित्ने छ।नयाँ कार्यको थालनी होला। शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ। साथीभाइको भेटघाटले मन प्रफुल्ल रहला। आलोचकहरूलाई व्यवहारले समेट्ने प्रयास गर्नुहोला। मान प्रतिष्ठामा बृद्धि होला। अपरान्हपछि मन शान्त हुने छ। चिन्ता समाप्त हुने छ। अर्थ उपार्जनका विभिन्न स्रोतहरू फेला पर्नेछन्।
लगानी तथा व्यापार–व्यवसाय थाल्ने योग छ। यात्रा सफल हुने छ। मन प्रसन्न रहला। शुभकार्यको थालनी होला। साथीले घात गर्ने छन्। दिन अनावश्यक झमेलामा बित्ने छ। दिन खराब छ। प्रेमीबाटै धोका पाइने छ।
अध्ययनको क्षेत्रमा सफलता हासिल होला।झै–झगडाको योग छ। मन पराएको वा विश्वास गरेकै मानिसबाट धोका पाउने योग छ। मिल्ने साथीभाइ र प्रेमीप्रेमिकाबीच मनमुटाव हुने छ।
मानसिक चिन्ता बढ्नेछ। यात्रामा मालसामान हराउन सक्छ। घरायसी झमेलामा परिएला। अपरान्हपछि मन शान्त हुने छ। चिन्ता समाप्त हुने छ। दिन उल्लासमय हुने छ। काममा मन जाने छ।
स्वास्थ्यमा गडबढी आउने छ। प्रेममा धोका मिल्ने योग छ। धनसम्पति जोड्ने योग छ। आफन्तबाट सहयोग हासिल हुने छ। मन प्रशन्न रहला। शुभचिन्तकहरूको सहयोग जुटे पनि सानो कमजोरीले विवाद हुनेछ।
सरकारी कामकाजले तनावै–तनाव झेल्नु पर्ने छ। परिबन्धले समस्या निम्त्याउने हुँदा योजना गोप्य राखेर अघि बढ्नुहोला। मौका पर्खंदा स्थितिमा सुधार आउनेछ। मिहिनेतले आँटेको काम बन्नेछ। समाजमा आफ्नो प्रभाव बढ्न सक्छ।
कला क्षेत्रमा सफलताको योग छ। महिलाहरूका लागि सौन्दर्य क्षेत्रमा सफलता हासिल होला। पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ। व्यापार व्यवसायबाट लाभ मिल्नेछ। कला क्षेत्रमा काम गर्नेलाई धेरै राम्रो दिन छ।आफन्तको सहयोग प्राप्त हुनेछ। शुभकार्यको चर्चा चल्नेछ।